Siri kukura kunoitika kuApple dzimbahwe muCambridge | IPhone nhau
Pasina mubvunzo, Apple payakatangisa yavo Siri mubatsiri muma4s, vazhinji vedu takashamisika nezvazvaigona kuitira vashandisi. Ichokwadi kuti pakutanga mubatsiri aingova muChirungu chete uye kuti mashandiro aaiita pama iPhone 4s anga ari mashoma, asi kuvandudza nemabasa matsva akaitwa mumubatsiri kusvikira nhasi patinogona kuti tsvakiridzo ichiripo. inoitwa yekuwedzera zvinowedzera uye sarudzo dzeSiri. Kuvandudza nekuvandudza mubatsiri Apple ine chaiyo nzvimbo muCambridge yeSiri zvinowedzera.
Kwekupedzisira Mbudzi ruzivo rwakauya kune yakasarudzika midhiya kuti mahofisi ari muYunivhesiti iri pedyo yeCambridge, yakagara VocalIQ vashandi (kambani yakatengwa neApple muna2015 kuti ikwanise mubatsiri) uye izvi zvakange zvakatsaurirwa kukura kwaSiri, asi Apple haina kuzvisimbisa zviri pamutemo chero nguva uye ikozvino havana kutaura chirevo asi zvaive zvechokwadi mushure mekuona. akaisa logo yeapuro pamusuwo wekupinda kwemahofisi. Izvo zvavanowana nenzvimbo idzi kuwedzera mukusimudzira kwemubatsiri ndeyekukwezva vanogona mainjiniya munzvimbo uye nenzvimbo ipi iri nani kupfuura Cambridge yeizvi.
Kufambira mberi kwevabatsiri pane nharembozha ndeyechokwadi uye zvishoma nezvishoma kuvandudzwa kunoitwa mavari izvo zvinobvumidza mushandisi kuita zviito kana kuzviita kuburikidza nezwi redu uye izvi zviri kuwedzera zvakasikwa, ndiko kuti, tinogona kuvabvunza mimwe mibvunzo zvakajairika kuti ivo tinzwisise zvakakwana. Panyaya yaSiri, isu tine dzakawanda nhau kana tikatarisa kubva panguva yekuvhurwa kwayo kusvika zvino, izvi zvinoratidza kuti Apple inodyara mukutsvaga uye pakati peCambridge ndizvo chaizvo zvavanoita chete zuva nezuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Siri » Siri kukura kunoitika kuApple dzimbahwe muCambridge
iOS 10 yatove padyo nekugadzwa pa80% yezvigadzirwa zvinoshanda